Google Gburu Star Analytics Google
Tuesday, April 6, 2010 Satọde, 27 Juun 2015 Matt Chandler kwuru
Na imikpu mmetụta gị afo nwere ike n'ezie-abịa site na ihe nchọgharị gị na. Elela anya ugbu a, mana Google na-ezube ịhapụ ihe mgbakwunye ihe nchọgharị ga-enye ndị ọrụ ohere ịpụ na nyochara gị by Google Analytics.
Google, na - eduga ndá »‹ na-eweta ihe na horsepower n'azụ okporo á »the zá» Google Analytics nchịkọta ngwá ọrụ, a na-ekwe ka ndị ọrụ zere ịbụ ndị esoro nke ngwa ọrụ ha.
Nke a na-eweta ọtụtụ ajụjụ na ihe nwere ike ịpụta maka webmasters na ndị na-ere ahịa weebụ ndị na-eji Google Analytics iji nyochaa okporo ụzọ weebụsaịtị, nke bụ isi otu ojiji nke ngwa mgbakwunye ga-emetụta nchịkọta nke data okporo ụzọ saịtị. Nke a na - arịọ ajụjụ ọzọ dị mkpa karị: gịnị kpatara Google ga - eji mee nke a mgbe Google Analytics anaghị anakọta data nkeonwe na mbụ?
Ihe mbụ na-adịru ikpeazụ, ọ dabere n'ihe a ga-atụle onye data. Ndi ihe omuma ISP gi na ebe ebe obibi gi di ka onwe? Nchịkọta Google anaghị anakọta adreesị IP nke ọ bụla, nke pụtara na ozi niile enyochara enweghị aha.
Nke a na-etinye Google na udi nke ngụkọta ndị ihu abụọ ebe ha nwere ike idebe ndekọ na-enweghị njedebe nke akụkọ ọchụchọ ndị ọrụ? Ikekwe. Usoro ọchụchọ na-enye Google ohere ịnye ọsịsa nchọta ahaziri iche nke ahaziri ịtụnanya, yana ọ bụ ezie na ha emeela ka ọ dịkwuo mfe ịpụ na njirimara a na nke ha Ebe Nchekwa, ha anaghị aga n'ụzọ ọ bụla iji kpọsaa ohere a. Ọ na-ekwukwa na otu nzuzo rịọrọ Federal Trade Commission ka ha mepee nyocha na Google Buzz, ya mere Google nwere ike na-agba agba ntakịrị na nzuzo nzuzo.
Ọgba aghara adịla oke na profaịlụ di elu, ma mmeghachi omume mbụ m bụ Ya mere? Mmadu ole mara na ha nwere profaịlụ Google, ma ya fọdụ na ha nwere ike idezi profaịlụ a ma gbanwee ntọala nzuzo ha na mmasị ad ha? Enweghi m ike ịchọta data ọ bụla nwere ike ịkọwapụta, mana kedu ọnụọgụ ngụkọta nke ndị ọrụ weebụ na-eji ngwa mgbakwunye AdBlock Plus maka Firefox? O nwere ike ịbụ na ezughị oke iji tinye ya na mpụga ọkọlọtọ.
Isi okwu m bụ na maka webmasters na ndị na-ere ahịa, ngagharị a nwere ike ire ndị ọzọ ndenye aha Omniture na WebTrends dị ka ndị anyị nọ n'azụ ákwà mgbochi ahụ chọrọ ohere data dị ka o kwere mee. Mana mbugharị ahụ nwere ike bụrụ ihe ikpere ikpere nye nsogbu na-akabeghị – –nwere ike ghara ịdị.
Tags: AnalyticsftcGoogle Analyticsomniturehọrọ ọpụpụprofaịlụelekọta mmadụ mgbasa ozi taaogherewebụsaịtị
Onye Bụ Ezi Ndị Na-ege Gị Ntị?
Demographics nke Martech Zone
Apr 6, 2010 na 9: 46 AM
Nchịkọta Google nọ n'ọnọdụ dị njọ. N'otu aka, ha bụ naanị otu - na-enye naanị ngwakọta Adsense na nchịkọta nchịkọta dị na ahịa. Ekwesiri ka ha tinye ha na ndi nyocha obula. N'akụkụ nke ọzọ, ha enweghị ike ịme ụfọdụ nnukwu njikọta (ntụgharị. Facebook Analytics by Webtrends) n'ihi na ha na-asọ mpi. Nke a yiri ka ọ dara ogbi, n'agbanyeghị.
Apr 6, 2010 na 2: 06 PM
Enwere m olileanya na Webtrends chere na nke a bụ ịme gị ka ị nweta otu ego helluva.
Ee, Pat East na Hanapin nọ na-ekwu okwu 'n'oge a. Mbido mbụ, mgbe ahụ Buzz, mgbe ahụ nkwado nke Caffiene, ugbu a nke a?
Ọ dịka ha na-anwa igbochi inweta otu ụlọ site na imebi ngwaahịa ha ruo mgbe ndị ọzọ jidere.
Apr 6, 2010 na 4: 50 PM
Ọ dị mma na nke a adịghị mma, belụsọ na ha nwere ụzọ iji soro ndị mmadụ na-eji koodu igbochi. 🙂
Apr 6, 2010 na 5: 10 PM
N'echiche America anyị banyere nzuzo nke a enweghị isi, mana ka Google Analytics nọrọ n'ọnọdụ dị mma na mba Europe (ndị na-ajụ ndị na-ere nchịkọta maka ụdị nwepu aha a), Google bụ onye ndu. Ọzọkwa, mgbanwe a na-enye ohere iji nchịkọta Google maka saịtị gọọmentị (ebe ọ na-agbaso ụkpụrụ nchịkwa gọọmentị US maka nzuzo).
Chee echiche ya dika ndu n’uzo di iche. O nwere mmetụta maka ndị na-ere ahịa, mana echere m na oge na-aga, ụkpụrụ nke gọọmentị ga-ejide ndị na-ere nchịkọta na-enyeghị ihe yiri usoro ịpụpụ a.
Apr 7, 2010 na 2: 10 PM
Isi ihe na-akpali mmasị. Echebeghị m banyere ahịa ndị Europe. Daalụ maka nghọta.